I-China Hand Shower Head abavelisi kunye nababoneleli-i-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Intloko yeshawari > Intloko yeshawa yesandla
Intloko yeshawa yesandla Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu imigca yempahla yococeko ibandakanya oku kulandelayo: Intloko yeshawa, Intloko yeshawari yesandla, iiseti zesilayidi sikaloliwe, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, iShower Bidet, Ishawa & izincedisi zegumbi lokuhlambela ngokunjalo norhwebo nezinye izinto zococeko. iimveliso kwi Made in China Website.
Intloko yeshawa yesandla idla ngokuhlulwa ibe ngumsebenzi omnye, imisebenzi emithathu, kunye nemisebenzi emihlanu. Ezona zinto ziphambili zikrwada yiplastiki ye-ABS ekumgangatho ophezulu, ukumelana nobushushu obuphezulu, ujongano lwendalo iphela, ilungele uninzi lweentsapho, iihotele, kunye newaranti yeminyaka emibini. Iimveliso zethu zidlulile ukuqinisekiswa kwexesha kunye nokuphuculwa okuqhubekayo, kwaye ziye zamkelwa ngabathengi kwaye zithengiswa ezithandwayo phesheya.
Intloko yeshawari yesandla ixhotyiswe ngoomatshini abatsha beplastikhi abalawulwa yikhompyutha; iinkqubo zokuvavanya eziphucukileyo kunye noomatshini bokupakisha abalungileyo, siyakwazi ukukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni njengoko kufuneka. Ngokumalunga nokupakisha, silungile ekupakisheni amadyungudyungu kunye neebhokisi zemibala, ewe, sinokubonelela ngokupakisha okukhethekileyo ukuba abathengi banemfuno. Njengomvelisi, sineziko lethu lokubumba, iinjineli ezinamava zilungele ukwenza naluphi na uphuculo lohlengahlengiso olucelwe nguwe ngexesha elikhawulezayo.
Iqhosha elinemisebenzi emithathu yeshawari yentloko
Eli Qhosha elinemisebenzi emithathu yeshawa yentloko Umgangatho ophezulu, iplastiki entsha ye-ABS, i-electroplating enamacala amabini, isitshixo samanzi esisitshixo esinye, iindlela ezintathu zokukhupha amanzi, ishawari eyonwabisayo yamava e-SPA.
Imisebenzi emithathu ye-Classic Shower
Le ishawari enemisebenzi emithathu yeklasiki yezandla zentloko yeshawari yesandla, imathiriyeli yeplastiki ye-ABS eNtsha, umgangatho olungileyo we-chrome, ukutshintshela okulula kokulawula imisebenzi emininzi, ujongano lwamanqaku amane jikelele.
Ishawari enemisebenzi emihlanu ye-Electroplating
Le ishawa ye-electroplating ye-Five-function ye-ABS yeplastiki, ijeli ye-silica ephezulu, kulula ukuyilawula i-multi-function switch, i-interface ye-universal-point interface.
Lo msebenzi omnye weshawa yesandla ngexabiso elihle, uyilo olulula, indawo yokuphuma amanzi ye-silicone eBlue, ubungakanani obuncinci, kulula ukuyibamba, i-chromed igqityiwe.
Kitchen Faucet Ishawa intloko
Le Kitchen faucet shower Head Classic ethandwayo ekhitshini ishawa yesandla. Iplastiki ye-ABS, i-chromed, i-2-umsebenzi, umgangatho omhle, owenziwe e-China
Ishawari yoMsebenzi oMnye oMbane we-Electroplating
Le Compact electroplating single function shower ngexabiso elihle, uyilo olulula, kulula ukuyibamba, imvula yespa iziva, umzi-mveliso wase China
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Intloko yeshawa yesandla zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Intloko yeshawa yesandla uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.